नरेन्द्र मोदी र नेपालको हिन्दूत्व | Bridge to Nepal and Nepali
भारतको आमनिर्वाचन, भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको सरकार र नेपालको हिन्दूत्व जोडिन पुगेको तर्क भारतीय विश्लेषकहरु गर्न थालेका छन्। भारतकै कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा हुनपुगेको र राजतन्त्रको अन्त्य भएको भए पनि भाजपाका अध्यष राजनारायण सिंह नेपाललाई हिन्दूराष्ट्रका रुपमा हेर्न चाहेको बताइसकेका छन् भने नरेन्द्र मोदी पनि पूर्वराजासँग पटक पटक भेटेर हिन्दूराष्ट्रमा हिन्दू नरेश हेर्न चाहेको आकांक्षा जाहेर गरिसकेका छन्। त्यसो भए भारतको निर्वाचनमा मोदीको जीतमा नेपाली हिन्दूवादीको राजनीतिक उम्मीद रहेको छ भन्न सकिन्छ।
१९८२ तिर भाजपा नाममात्रको थियो। भाजपा र राजदरवारवीच मीठो सम्बन्ध थियो। लालकृष्ण आडवाणीदेखि अटलविहारी बाजपायीसम्म नेपालका नरेशलाई भगवानको अवतारका रुपमा लिन्थे, त्यही अनुसार भेट गर्थे। तर, भारतले माओवादी हतियार चलाएर कांग्रेसको प्रस्तावमा राजतन्त्र र कांग्रेसकै नेतृत्वमा राजनीतिक सहमतिका आधारमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गराउन सघायो। २०६५ साल जेठ १५ पछि पशुपतिनाथदेखि आन्द्र, केरलासम्म लाल करिडर बनिसकेको छ र शायद भारतलाई भूल अनुभव भइसकेको छ। त्यसैले नेपालमा हिन्दूराष्ट्रप्रति भाजपा बढी संवेदनशील भएर आएको हुनुपर्छ।
आगामी चुनावमा मोदीले जिते र प्रधानमन्त्री भए भने नेपालको हिन्दूराष्ट्रको आन्दोलनमा निकै प्रभाव पर्ने निश्चित छ। यो वीचमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले दिल्ली पुगेर नरेन्द्र मोदीसँग भेट गरेर आइसकेका छन्। मोदी हिन्दूत्वको कडा अनुशासनमा रहेकाले राम जन्मभूमि विवादमा उनी नराम्ररी मुछिएका थिए। नेपालमा ८३ प्रतिशत हिन्दू छन् र तिनको सदासयता मोदीतिर हुनु स्वभाविक हो। हुन पनि मोदी र राजनाथ सिंहले पटक पटक भनिसकेका छन् कि नेपाल धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गर्नु गलत हो। नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ। नेपाली विद्वान, विश्लेषकहरु भारतको नेपालनीति गलत भएकाले नेपालमा परिवर्तन त आयो तर भारतका प्रति घृणा बढाएर आयो, नेपालमा भारतको पकड खस्कदै गएको छ। भारतले कुनै पनि नेपाली भारतविरोधी हुनैसक्दैन भन्ने यथार्थमा उभिएर सोच्नै सकेनन् भन्छन्।
भारतले १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता गराएर माओवादी र प्रजातन्त्रवादीलाई मिलाइदिएको थियो। यस सम्झौताबाट भारतलाई कुनै लाभ भएन। हो, नेपालले दुःख पायो, लामो संक्रमण भोगिरहेको छ। यो संक्रमणभन्दा बढी बेफाइदा भारतलाई भएको छ। यद्यपि विश्लेषकहरु भन्छन्– मोदी सत्तामा आए पनि ‘र’ ले मोदीलाई नेपालमा हिन्दूवाद फैलाउन र बलियो पार्न दिने सम्भाबना कम छ। तर, हिन्दूवादी र संवैधानिक राजतन्त्रवादी राप्रपा नेपाल नेपालमा यी दुबै विषय स्थापित गराएर छाड्ने संकल्प लिएर संविधानसभा, संसदमा गएका छन्। राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले मोदीसँग भेटवार्ता गरिसकेकाले कुनै जेन्टलमेन्ट एग्रीमेन्ट भएको हुनसक्छ भन्छन् विश्लेषकहरु। यद्यपि भाजपाका अध्यक्ष तथा मोदीले नेपालमा हिन्दूराष्ट्रका बारेमा नेपाली जनताले निर्णय गर्नेछन् भन्ने अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्।
नेपालमा हिन्दूराष्ट्र कायम हुनु भनेको स्वतः राजतन्त्र स्थापित हुनु हो। हिन्दूत्व र राजतन्त्र पर्याय संष्कृतिका द्योतक हुन् नेपालका सन्दर्भमा। पूर्वराजा पटक पटक अनेक निम्तो मान्न भारत जाँदा मोदी र राजनाथ सिंहले पटक पटक भेटेका छन् भने आजकल भारतले पूर्वराजालाई वर्तमान राजालाई दिनेजस्तै सम्मान दिन थालेको अनुभूति गर्नेहरु पनि प्रशस्तै छन्। पूर्वराजाले राजतन्त्र ल्याउने कुनै आकांक्षा प्रकट गरेका छैनन्, संविधानसभालाई नै सघाइरहेको देखिन्छ। तर, कतिपय मन्दिर दर्शनमा जाँदा राजनीतिक दलहरु राजतन्त्र फर्काउने प्रयास भनेर आलोचना गर्ने गरेका छन्। भारतका दूत हुन् करण सिंह। उनी पटक पटक नेपाल आएका छन् र पूर्वराजालाई पनि भेट्ने गर्छन्। करण सिंह नै त्यस्ता व्यक्ति हुन् जो २०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजनीतिक सहमतिका साक्षी हुन्। उनी कुनै प्रकारको राजतन्त्र नेपालमा रहोस् भन्ने सम्झाैताका किनाराका साक्षी भए पनि आजसम्म उनले यस विषयमा मुख खोलेका छैनन्। पार्टीहरुविरुद्ध पूर्वराजाले बोल्ने
यसरी मोदीको चर्चा नेपालमा बढे पनि माओवादी र राजतन्त्रविरोधीहरु नेपालमा अव राजतन्त्र अथवा हिन्दूराष्ट्र फर्कन नसक्ने तर्क गर्छन्। अहिलेसम्म भारतले नेपालप्रति खासै दिलचस्पी देखाएको देखिन्न। तर मंसिर ४ को संविधानसभाको निर्वाचनमा मधेसी दललाई नछोएरै माओवादीलाई धरासायी बनाउन भारतले अहम् भूमिका खेलिछाड्यो। १७ वर्ष भयो भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरेका छैनन्। कांग्रेस र एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भारतका प्रम डा. मनमोहन सिंहले नेपालको भ्रमण गर्ने तैयारी सुरु भइसकेको छ। यो भ्रमण कार्यकाल सकिएका मनमोहन सिंहको भए पनि उनले नेपाल–भारत सम्बन्ध हिजो जे भएको भए पनि आउने दिनमा सुमधुर बनाउन कोसे ढुंगा राख्नसक्ने अनुमान विश्लेषकहरुले गरेका छन्। हेर्नुछ, त्यस्तै होला कि नहोला?
अर्को » माओवादी सभासदको सट्टामा एसएलसी परीक्षा दिने पक्राऊ »
पहिलाको » भट्टराईलाई केजरीवाल बन्ने रहर »